वैकुण्ठ ढकाल शनिबार, जेठ १७, २०७७ मा प्रकाशित
ऊ विदेश गएको दुई वर्ष भइसकेको थियो । लकडाउनले खाडी देशमा रहेका धेरैको रोजगारी जोखिममा रहेको समाचारहरु पनि आइरहेका छन । विदेशमा रहेका चिनजान भएका केही युवाहरुसँग कुराकानी हुँदा आफूहरु सुरक्षित रहेको बताउँथे, मन त्यसै त्यसै खुशी हुन्थ्यो ।
विदेशमै भए पनि फेसबुकमा दिनहुँ उसको मुक्तक र गजलहरु आइरहन्थ्यो । धेरैजसो उसको रचनामा श्रृंगारिक रस हुन्थ्यो । उसले श्रृंगारिक भने पनि कुनै कुनै अश्लिल नै हुुन्थ्यो । त्यसमा क्रियाप्रतिक्रिया दिन्थें । कतिपय त मेरै जोडवलले सामाजिक सञ्जालबाट हटाएको पनि थियो ।
तर, आजकल उसलाई फेसबुकमा अभिव्यक्त भएको देखिएको छैन । म्यासेञ्जरमा पठाएको म्यासेजहरु पनि सिन भएको हैन ।
एक रात, रातको नौ बजेतिर अनलाइन देखियो ।
कमरेड कता हो ?
कपन तिर । (कमरेड भनेपछि प्रतिवाद गरिहाल्थ्यो र नभन्न बारम्बार सचेत गराउँथ्यो, तर पनि म कमरेडबाट सम्वाद शुरु गर्थें । आज प्रतिवाद गरेन । विदेश छु, अझै केही वर्ष फर्किन्न भन्नेले एकाएक कपन भन्दा मनमा सानोतिनो कम्पन भयो । केहीबेर केहि लेखिन, म्यासेज सिन गरेर गम खाएर बसें । म्यासेञ्जरले कुर्लुङ ग¥यो ।
‘म त बरबाद भएँ, यार, बुद्धि बिगारें, कपन तिरै घरजम गरेर बसेको ।’
‘नयाँ घर किन्नु त रामै हो नि ।’
‘घर हैन यार, एउटा थाप्लोमा दुई वटा नाम्लो भिरें ।’
‘ए, घर नयाँ हैन, जहान नयाँ ?’
‘पागलपन कि यथार्थ ?’
‘यथार्थ यार कसैलाई नभन नि... , बुद्धि बिग्रियो यार बिग्रियो ,,
‘बुढीलाई थाहा छ ?’
(म्यासेञ्जरमा तुरुन्तै कल गरें, तर केही बुझिएन ।)
‘नयाँ जहानको नाम के हो नि ।’
‘रविना अधिकारी ।’
‘उसकी बच्चाबच्ची ?’
‘उसको पनि दोस्रो विवाह ?’
‘यो सब कसरी भयो ?’
‘ल ल यार, तिमीलाई सबै भन्छु । कुनै दिन भेटेर भन्छु, उनी अघि बाहिर गएकी थिइन, आउने बेला भयो राखें, बाइ ।’
‘खै नयाँ भाउजूको फोटो हेरौं त ?’ मलाई बाई भने पनि उ अनलाइनमै थियो ।
उसले पहिले पनि लव म्यारिज नै गरेको हो । तँ तँ म म चले पनि म भन्दा उमेरले ५/६ वर्ष जेठो थियो । पढ्नमा तेज नै थियो । अनि उसको त्यत्तिखेर निकै चर्चा भएको थियो । लुकी लुकी झ्यालबाट चढेर लव गरी गरी भगाएको थियो गर्लफ्रेण्डलाई । सानीआमालाई सघाउन आएकीलाई भगाएको थियो, छ महिना जत्तिमै । प्रसिद्ध ऋषेश्वर मेलामा भगाएको थियो उसले । यसै पनि फागूपूर्णिमाको दिन विशेष मेला लाग्ने ऋषेश्वर महादेव मन्दिरमा । मेलामा अघिल्ला वर्षहरुमा पनि कुनै न कुनै जोडीले विवाह गर्थे । त्यो वर्ष पनि तीन जोडीको विवाह भयो । तर सबैलाई ‘उसैको झ्याले लवले ओझेलमा पारी दियो ।’ त्यो साँझ बजारमा हल्लाखल्ला भइसकेको थियो, थाहा नपाउनेहरुबीच पनि कानेखुसी गर्दागर्दै एक कान दुई कान मैदान भइसकेको थियो । बजारका महिलाहरु ठूलो स्वरमा भन्दै थिए, हामीलाई त पहिल्यै थाहा थियो नि, तिनीहरुको चर्चिकलाले कान र आँखा पाकिसकेका थिए ।
राति ब्यूझिएर पनि मोबाइल हेरें, वाइफाइ अन गरें, म्यासेञ्जर खोलें, ऊ अनलाइनमै रहेछ । तर मेरो म्यासेज हेरेको थिएन । रातभर अनलाइन बस्ने, म्यासेज नहेर्ने ? उसको वालमा हेरें, २९ मिनेट अघि बुढाबुढीको फोटो पोष्ट्याएको रहेछ –मेरो, मुटु, मेरो प्राण भन्दै । मलाई पनि झोक चल्यो– तत्कालै कमेन्ट ठोकिदिएँ–
‘नकचरो पुरुषको दोहोरो चरित्र ।’
उसको जोडीको फोटोमा भन्दा मेरो कमेन्टमा लाइक आयो ज्यादा । उसलाई अनि मलाई चिन्नेहरुले मेरो कमेन्टमा कमेन्ट गरे, सही हो सही हो । भनेर । यसले मेरो शंकामा थप बल पुग्यो ।
हुन त म उसको अति घनिष्ठ साथी त हैन । साहित्यिक गफगाफले नजिक बनायो । उसको संघर्षको कथाहरुको म स्रोता भएको थिएँ । फेसुबकहरुमा आउने उसका मुक्तक र गजलका पाठक ।
एसएलसी दिने वित्तिकै काठमाडौं, आएर अर्काको पसलमा काम गथ्र्यो । पछि अरुको काम छाडेर नयाँ पसल शुरु ग¥यो । जहिल्यै पसल राम्रो नचलेको गुनासो गथ्र्यो । २०७२ को भूकम्पले त काठमाडौंको व्यापार धुलिसात भइगयो । त्यहाँमाथि उसले पसल राखेको घर चिराचिरा प¥यो । पसल सार्नु प¥यो । कलंकीमा पसल सारेपछि उसको र मेरो भेटघाट बाक्लो भयो । तर उसले पसल राखेको पुरै घर होटल चलाउने भनेर अर्कै मानिसले लिया । उसलाई मेरी बिरालोले बच्चा सारे जस्तो पसल सार्नुकै हैरान । कलंकीमै हुँदा उसको अनेक रुप देखियो । त्यही बीचमा उसले आफ्नो गोप्य घटना भनेर सुनायो, पूरै कथात्मक शैलीमा–
मेरो लेखाइलाई मन पराउनेहरु पनि भेटें यार मैले, एक दिन गजलसम्वन्धी कार्यक्रममा मैले एक घण्टा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ । त्यहाँ केही गजल पनि सुनाएको थिएँ । सबै श्रृंगारीक रसका गजल । अन्तमा फेसबुक आइडी र मोबाइल नम्बर पनि कार्यक्रमबाटै सार्वजनिक भयो । कार्यक्रम पछि केही फोनहरु आए, राम्रै कुराकानी भयो । एक जना गजल पारखीले दिनहुँ फोन गरेर गजल सुनाउन आग्रह गर्ने गरेको र उनकै लागि कम्तिमा एउटा गजल लेख्नै पर्ने दबाब भयो । यसकै कारण आज मसँग एक सय वटा गजल भएको छ । एक दिन पसलमै भेट्न आइन । मेरो स्रोता मात्रै नभइ राम्रो ग्राहक पनि, उनी आएको दिन, राम्रै व्यापार हुन्थ्यो । फेसबुकमा साथी भयौं । म पसलमा हुँदा हामी फोनमै कुरा गथ्र्यौं । घरमा फोनमा कुरा हुने सन्दर्भ नमिल्ने फेसबुकमा मध्यरातसम्म च्याट हुन थाल्यो ।
हामीबीच भावनात्मक दुरी निकै कम हुँदै गयो । एक दिन उनले उपत्यका बाहिर घुम्न जाने प्रस्ताव गरिन, मैले नकारिन । महिनाको अन्तिम शनिबार पसल बन्द हुन्थ्यो । त्यही शनिबार जाने फिक्स भयो । नगरकोट गयौं । खाना उतै खायौं । उनैले कोठा बुक गराएकी रहिछन । हामीबीच सबै विषयमा कुरा भइसकेको थियो । एउटा कुरा प्रत्यक्ष भेटेर मात्रै भन्छु भनेकी थिइन, म सुन्न आतुर थिएँ । कोठामा गयौं । फ्रेस हुन्छु भनेर बाथरुम छिरेकी उनी त दिउँसै नाइट गाउनमा बाहिरिइन । उमेर भन्दा निकै कम देखिइन, उत्तिकै सुन्दर पनि । म त हेरेको हे¥यै भएँ, उनले बोलाइन मेरो राज्जा के हेरेको त्यसरी, कहिल्यै हेर्न नपाएको जसरी । म निन्द्राबाट ब्यूझिएँजसरी झल्याँस भएँ । अनि अब तयार हौ, मेरो गोप्य कुरा सुन्न भनिन । मैले आफूलाई तयार पारें ।
उनको विवाह भएको तर सन्तान नभएको कुरा थाहा थियो । त्यसपछाडिको कारण थाहा थिएन । उनको पतिकै कारण सन्तान नभएको पुष्टि भएको बताइन । त्यसको वैज्ञानिक र चिकित्सकीय कारणहरु पपनि भनिन, त्यो भाषाहरु मैले बुझिन । त्यसको लागि अनेकौं, उपचार गरिएको पनि बताइन । नेपाल र भारतमा भेटेका डाक्टरहरुको नाम र मितिसमेत एक एक गरी बताइन । उनको स्मरण शक्ति देखेर चकित परें । भए जजि सारा उपचार गरिसकेको बताइन । अब कुनै पनि उपचारले काम नगर्ने चिकित्सकहरुले बताएको भनेर उनी भक्कानिइन ।
त्यो भन्दा पनि गोप्य कुरा छ अर्को सुन्छौं ? मैले समर्थनमा टाउको हल्लाएँ । नेपालीलाई यसै पनि बिसौलीको जीब्रो फट्कार्नुभन्दा धार्नीको टाउको हल्लाउनु सहज हुन्छ । लामो उपचार र विभिन्न औषधिहरुको असरले होला अहिले त उहाँको हतियारले काम नै गर्दैन । मैले सन्तान सुख त पाइन नै अब देह सुखबाट पनि बिमुख भएको धेरै भयो । श्रीमान पनि यो कुरामा निकै दुःखी छन । तिमी कल्पना पनि गर्न सक्दैनै, होला कुनै पनि लोग्नेले स्वास्नीका लागि कृत्रिम अंगहरु आफैंले किनेर ल्याइदिन्छन भनेर तर मेरोे लोग्नेले किनेर ल्याइदिएका छन । एउटा पुरुषको मनमा आफ्नै कृत्रिम गुप्तअंग किनेर ल्याउँमा के बिझ्छ, भन्ने मैले बुझेकी छु । तुलना गर्ने नै हो भने एउटा महिला आफ्नो कारणले आमा हुन नसक्दा जत्ति दुःखी हुन्छे, एउटा पुरुष पक्कै पनि आफ्नो गुप्तांंग किन्दा हुन्छ । तर प्राकृतिक तरिकाबाट पाउने सुख कृत्रिमले दिन्छ भन्ने मलाई कहिल्यै विश्वास भएन । श्रीमान हुँदाहुँदै कसरी प्रयोग गरौंं म ती खेलौना ।
मैले मेरो लोग्ने भन्दा बाहिर कसैलाई यो कुरा कुनै मान्छेलाई भनें भने तिमीलाई भनें । अब तिमी नै भन मैले तिमीलाई कत्ति विश्वास गरेर भनें हुँला । तिमी असल मान्छे त हौ नै, त्यो भन्दा पनि बढी असल लोग्ने मान्छे हौ । म तिमीसँग याचना गर्छु । आज मलाई लोग्नेमान्छेले दिने खुसी देउ, सुख देउ । मलाई थाहा छ, तिमीले पनि मलाई सन्तान सुख त दिन सक्दैनौ । दिन सक्ने अवस्थामा भेटेको भए के हुन्थ्यो अर्कै कुरा ।
उसले यो घटनालाई आफ्नो गल्ती भनेको थियो । तर साँच्चै त्यो गल्ती नै थियो कि परिस्थितिजन्य घटना ? तुलोमा हाल्यो भने काँटा कतातिर ढल्किएला । त्यसको एक हप्ता पछि उसैले म्यासेञ्जरमा कल गर्यो । केहीबेर हाम्रो नोकझोक चल्यो । तर उसले फोटो पठाउन इन्कार नै गर्यो । त्यही दिन विहान उसको श्रीमतीले बुढाबुढीसँगै भएको फोटो पोष्ट्याएर मेरो मन–मुटु लेखेकी थिइन । मलाई लाग्यो, केटो सारा आन्तरिक समस्या सल्टाएर मसँग कुरा गर्न आयो ।
अस्तिको कुरा कन्टिन्यूहुँ गर ।
ऊ बोल्न थाल्यो– ‘उनलाई मेरो बारेमा सबै थाहा छ, मेरो एक छोरा एक छोरी छन, छोरोले यसैपाली एसईई दिने पनि थाहा छ । उनको घरपरिवार सबैलाई थाहा छ, मात्र मैले मेरो घरपरिवारलाई भन्न सकेको छैन, उनको श्रीमान पनि विदेश गएको १५ वर्ष भइसकेको छ । सम्पर्क नभएको पनि धेरै भयो । उहिल्यै कुरा हुँदा बुढाले आफ्नो बाटो रोजे हुन्छ भनिसकेका रहेछन । हुने हार दैव नटार भयो । सबै कुरा भन्नुहोस, हामी मिलेर बस्छौं भन्छिन, तर म कुन मुखले भनौं भन्न सकिरहेको छैन ।’
‘अनि नेपाल आएको बुढीलाई थाहा छ त ?’
‘छैन नि, कहाँ हुनु ।’
‘भने पछि नयाँ पाएपछि पुरानोको वास्ता नहुने रहेछ, के गरेर बस्ने नि, विदेशबाट फर्किकाहरु इलम नगरी बस्न सक्दैनन भन्छन ?’
‘किराना पसल छ, घरमै सानो ।’
‘भनेपछि, घरसहित हान्देको ?’
‘तेस्तै पर्यो ।’
‘जहिल्यै पैसा कमाउन सकिन भन्ने केटोको योजना र लगानी अन्तै रहेछ र पो ...’
‘त्यसो केही होइन, सबैलाई म बिदेश नै छु भनेको छु । बुढीलाई चाहिँ अब म आउँछु कुनै पनि बेला भनिराछु ।
‘पैसा पठाइरहेको होला नि ?’
‘नाइ, छैन, तलब देकै छैन भनेर ढाँटिराछु, लकडाउनले सजिलो पार्देको छ, पत्याएकी छन, बिचरी सोझी छिन ।
‘म भन्दिन्छु । कति हो बुढीको नम्बर ?’
‘हो, हैट मान्छे, मलाई मार्छे यार, छोराछोरीले काट्न आउँछन् यार ।’
‘म आफैँ बिस्तारै सम्झाउँदै बुझाउँदै भन्नु पर्ने छ ।’
‘ल ल भन्दै गर्नु, त्यो भन्दा अगावै, म तिमीहरू दुबै जनाविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा हालेर थुनाउँछु । धोकेबाज ।’
यत्ति भनेर वाइफाइ अफ गरें । उसले पसलमा सुनाएको रोमान्टिङ कहानीहरु सम्झिएँ । तर यो घटना कुनै पनि कहानीसँग मेल खाएन । कतै नगरकोटवाला कहानीको ट्वीस्ट त हैन ।
त्यसको केही दिनपछि संयोगले कालिमाटीमा साथीको श्रीमतीसँग जम्काभेट भो, लकडाउनको समय कहिँ बसेर चिया खाने अवस्था नै रहेन । हाइहेल्लो भयो । ठीकठाक नै देखिइन । पहिला जस्तो थिइन उस्तै । छोटो भेटमा पनि मैले एउटा सेल्फी लिइ हालें ।
त्यस साँझ, उसलाई उसकी बुढीसँग लिएको सेल्फी पठाएँ, अनि सबै कुरा भनेको पनि भनें ।
उसले तत्कालै बुढीसँग भिडियो च्याट गरिरहेको फोटो पठायो । केहीबेरमा बुढाबुढीबीच भएको कुराकानीको सानो अंश पनि । जुन भिडियोमा विहान मसँग भेट हुँदा लगाएको लुगा नै थियो ।
उसले भिडियो कल ग¥यो, उठाइन । धेरै पटक गर्दा पनि नउठाएपछि अडियो सन्देश पठायो । जुन यस्तो थियो– ‘हैट, मान्छे, कत्ति सहजै पत्याएको है, के नविनले नानूलाई धोका दिन्छ ? कल्पना पनि नगरे हुन्छ, पत्रकार महोदय । पत्रकारलाई पनि विश्वास लाग्ने गरी घटनाक्रम र परिवेश बनाएर पत्यार लाग्ने गरी सुनाउन सकें भनेपछि म ठूलै कलाकार भएँ, अब नेपाल फर्केर अभिनय थाल्नु पर्ला, कथा लेखिराख्नु ल ।’
उसले सुनाएको यो कथा भएपछि मैले पनि अर्को कथा लेखिरहनै परेन ।